DLULA i-Eurocopter X3 v1 X-Plane I-10 - iRikoooo
Play 4 073
Umbhali: Jean-Pierre BARIL, uJean-Marc Tercier
I-Helikopta X3 (ijikelezi elilodwa eliyinhloko elinamakhasi amahlanu, abaxhasi ababili abanamakhasi amahlanu) I-Modeling Version 1.0 yeX3 Eurocopter ye X-Plane 10.
Afakwe imibhalo French.
Inhloso ngqangi yalo msebenzi ukuze sikwazi ukujabulela ezindizayo indiza nale ubuchwepheshe obusha. Le nqubo indiza yadalwa besebenzisa nemingcele ehlongozwayo by Plane uMenzi (ngaphandle plugins).
Side ophephela ukuvumela imisebenzi eminingi ngesikhathi esisodwa uthole booster kanye anti-torque, njengoba empeleni.
Ngokwemibiko ethile izivivinyo eyenziwe Rikoooo, abanikeze asebenza nabo virtual ongabonakali uma plugin "Gforce" inikwe amandla. Zama ukubona uma unayo inkinga efanayo.
Olunye ulwazi livela idatha: injini NH90 The izikebhe of Dauphin / EC 155, X3 iboleka izici.
Uma unesithakazelo, inguqulo payware (v2) iyatholakala kwi x-plane.org esitolo. Rikoooo uthola ikhomishana yokuthengisa.
The Eurocopter X3 (liphinyiselwe "X-cube") kuyinto CMG yokulinga oluqanjwe Eurocopter.
X3 yokubonisa has izinjini ezimbili drive ngumuntu gear ibhokisi ongayedwa evundlile Rotor blade 5 futhi ophephela ezimbili screw efakwe iziphunzi amaphiko.
Lena inhlangano yeseli Dauphin kanye transmission main Eurocopter EC 175 nge Imiphumela ezimbili ezengeziwe umkhumbi ophephela. I ngamandla is olunikezwa ezimbili injini NH90 Rolls-Royce / Turbomeca the RTM322 futhi axhunyiwe ngumuntu shaft bendiza. (Wikipedia)